Ukufumanisa iLifa lakho leFransi
Ukuza kwigama lesiFrentshi elithi 'igama lomnxeba' liguqulela ngokuthi "igama elingaphezulu okanye ngaphezulu," amagama okanye amagama achazayo alandele ukusetyenziswa kwawo eFransi emva kwexesha le-11 leminyaka, xa kuqala kudingeke ukuba ungeze igama lesibini ukuhlukanisa phakathi kwabantu igama elifanayo. Isiko lokusebenzisa amagama okungaqhelekanga akuqhelekanga kwiinkulungwane eziliqela, nangona kunjalo.
Amagama amaninzi aseFransi anokulandelwa kwenye yezo ntlobo ezine:
1) I-Patronymic & Matronymic Surnames
Ngokusekelwe kwigama lomzali, eli liqela eliqhelekileyo lamaFrentshi amagama okugqibela. Amagama abhalwe ngamagama abhaliweyo asekelwe kwigama likabazali kunye negama elibizwa ngegama lomama kwigama lomama. Igama lomama lalivame ukusetshenziswa kuphela xa igama likayise lingaziwa.
Amagama abhalwe ngegama elibizwa ngePronym and matronymic eFransi zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo. Ifom yohlobo lokuhlanganisa isiqalo okanye isisombululo esithetha ukuthi "unyana" (umzekelo , de, du, lu, okanye uNorman fitz ) kwigama elinikeziweyo lalingenanto eqhelekileyo eFransi ukuba kumazwe amaninzi aseYurophu, kodwa eqhubekayo. Imizekelo ibandakanya uJean de Gaulle, okuthetha ukuba "uYohane, unyana weGaulle," okanye uTomas FitzRobert, okanye "uTomas, unyana kaRobert." Iintlanzi ezinentsingiselo ethi "unyana omncinci" (-eau, -elet, -elin, she, elet, njl.) Nayo ingasetyenziselwa.
Uninzi lwegama lesiFrentshi kunye negama elingu-matronymic alinaso isiqalo sokuqhawula, nangona kunjalo, ukufumana ngokuthe ngqo igama lomzali, njengoAugust Landry, ngo-Agasti, unyana ka-Landri, okanye uTomas Robert, ngokuba "uTomas, unyana kaRobert. "U
2) Amagama eSurnational Occupational
Ngokuqhelekileyo phakathi kwamaqhina aseFransi, amagama okugqibela asebenzayo asekelwe kumsebenzi womntu okanye urhweba, njengoPerre Boulanger [i-baker], okanye "uPerre, umbheki." Umsebenzi oqhelekileyo oqhelekileyo ofumene ngokuqhelekileyo njengamaqonga aseFransi abandakanya uBerger ( umalusi ), iBisset ( weaver ), uBoucher ( umcengezi ), uCaron (i- cartwright ), umqaphi ( umchweli ), u-Fabron ( umkhandi ), u-Fournier ( ubhaki ), uGagne ( umlimi ), uLefebvre ( umkhandi okanye umkhandi ), uMarchand ( umrhwebi ) kunye noPelletier ( umthengisi wemilingo ).
3) Amagama amagama achazwayo
Ngokusekelwe kumgangatho oyingqayizivele womntu, amagama achazwayo aseFransi aqheleke ngokuvela kumagama angama-noun okanye amagama asepilini, njengoJacques Legrand, ngoJacques, "omkhulu." Eminye imizekelo eqhelekileyo iquka omncinane ( iincinci ), i-LeBlanc ( ubunwele be-blonde okanye ubuciko obuhle ) , IBrun ( iinwele ezimdaka okanye ubumba obumnyama ) kunye neRoux ( iinwele ezimvu okanye ubuciko obunzima ).
4) Iimpawu zegama lomhlaba
Amagama asekuhlaleni okanye amaFrentshi asekuhlaleni asekelwe kwindawo yokuhlala, ngokuhlala ehlala kwindawo yokuhlala (umz. Yvonne Marseille - Yvonne evela kwidolophana yaseMarseille). Bangaphinda bachaze indawo ethile kwindawo ethile kwidolophana okanye idolophini, njengoMichel Léglise ( icawa) , owayehlala ecaleni kwecawa. Iziqu zokuqala "de," "des," "du," kunye ne "le" eziguqulelwe ngokuthi "ze" zingatholakala kwakhona zisetyenziselwa amagama angamazwe aseFransi.
Iimpawu ze-alias okanye amagama adibeneyo
Kweminye imimandla yaseFransi, ifom yesibini ingaba yamkelwe ukwenzela ukwahlula phakathi kwamasebe ahlukeneyo kwintsapho enye, ngakumbi xa iintsapho zihlala kwidolophu enye kwizizukulwana. Ezi zikhundla zamagama eziqhelekileyo zihlala zifunyenwe ngaphambili kwegama elithi "dit." Ngamanye amaxesha umntu wada wamkela igama elithi igama lentsapho, kwaye wayilahla igama loqobo .
Lo mkhuba wawuqheleke kakhulu eFransi phakathi kwamajoni kunye nabanqwelisi.
Iziqalo zesiJamani zamaGama aseFransi
Njengokuba amaninzi amagama aseFransi aphuma kumagama okuqala, kubalulekile ukwazi ukuba amagama amaninzi aqhelekileyo aseFransi anemvelaphi yaseJamani , eza kwifestile ngexesha lokuhlasela kweJamani eFransi. Ngako oko, ukuba negama kunye nemvelaphi yaseJamani akuthethi ukuba unabo okhokho baseJamani !
Igama elisemthethweni Utshintsho kwiFransi
Ukususela ngo-1474, nabani na owayenqwenela ukutshintsha igama lakhe kwakufuneka ukuba athole imvume evela kuKumkani. Ezi zinguqu zegama ezisemthethweni zifumaneka zikholiswe kwi:
I-Archiviste Jérôme. Dictionnaire des changements de noms ka 1803-1956 (Inkcazelo yatshintsha amagama ukusuka ngo-1803 ukuya ku-1956). Paris: Librairie Francaise, 1974.
Iintsingiselo kunye neMvelaphi yegama eliqhelekileyo lamaFransi
2. UBERNARD 27. LAMBERT
3. UDUBOIS 28. BONNET
4. UTOMAS 29. FRANCOIS
5. UROBERT 30. MARTINEZ
6. RICHARD 31. UHLU
7. IPETIT 32. GARNIER
8. EMANDLA 33. QINISO
9. LEROY 34. UROUSSEAU
10. I- MOREAU 35. I-BLANC
12. UMTHETHO 37. MULLER
14. UMICHEL 39. ROUSSEL
IGARCIA 40. I-NICOLAS
17. UBERTRAND 42. UMORIN
18. UROUX 43. MATHIEU
19. IINCINCENT 44. UKWENZA
20. UMFANISI 45. GAUTHIER
21. UMELEL 46. ​​DUMONT
22. I GIRARDI 47. LOPEZ
24. LEFEVRE 49. I-CHEVALIER
25. UMERCIER 50. UROBIN
I-SIMMONS Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Iinkcukacha ezifutshane malunga ne-K2: Intaba yesiBini ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi